AGAASIMAHA WARBAAHINTA ARLAADII OO KA TACSIYEEYAY QARAXII SHALAY MUQDISHO KA DHACAY?
Sunday October 15, 2017 - 19:24:11 in Featured by Super Admin
Agaasimaha warbaahinta Arlaadii Dr. Cabdullahi Ibraahim " Amaandhoorey" ayaa Shacabka Soomaaliyeed ugu tacsiyeeyay dadkii ku wax yeelobay qaraxii shalay ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Dr. Amaandhoorey oo si aad ah ugu murugooday qaraxii dadka badan galaaftay ee shalay galab ka dhacay Magaalada Muqdisho ayaa , Ilaahey ugu baryey dadkii waxyeelada ka soo gaartay in u naxariisto intii dhimatay, inta dhaawaca ahna ilaahey u booga dhayo.
”Shalay Muqdisho wixii ka dhacay waa musiibo sidaasi waxaa yiri Agaaasimaha Warbaahinta Arlaadi Dr. C/Laahi Ibraahim " Amaandhoorey" oo sheegay in isaga oo ka wakiil ka ah Wariyaasha Howlwadeenada' kala duwan ee Amaandhoorey.com & Baidoanews.com Umadda Soomaaliyeed, ugu tacsiyeeynayo dhibatadaasi soo gaartay.
Dr. C/Laahi Ibraahim " Amaandhoorey" ayaa dhanka kale baaq u diray Shacabka Soomaaliyeed' isaga oo ugu baaqay in gurmad loo sameeyo oo aan loo kala harin dadkii waxyeeelada ka soo gaartay qaraxii shalay ee ku jira Isbitaalada kala duwan.
Qaraxiii shalay galab ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ahaa kii ugu xoog badnaa ee Muqdisho ka dhaca mar qurana ay ku dhintaan dad ka badan 200-qof, waxaana wali isbitaalada yaala meydad iyo dhaawacyo badan oo wax ku noqday qaraxii shalay dhacay.
Sawirka Agaasimaha Warbaahinta Arlaadi Dr: Amaandhoorey